Labo nin oo looga shakiyay sumeyntii Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia - BBC News Somali
Labo nin oo looga shakiyay sumeyntii Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia
Sawirada Elexander Petrov iyo Ruslan boshirov
Waxaa la sheegayaa inay jiraan "cadeymo ku filan" oo lagu eedeyn karo in labada nin oo lagu kala magacaabo Elexander Petrov iyo Ruslan boshirov ay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Salisburry.
Dilalka qaarijinta ah ee lagu eedeynayo Ruushka oo soo kordhaya
Nin wax ka sameeyay sunta kiimikada oo hadlay
Basaaskii ruushka ahaa ee la sumeeyay oo xaaladiisa ay ka soo reyneyso
Waxaa loo maleynayaa inay raggani isticmaalayeen magacyo labaad da'dooduna ay ahayd 40 sano.
Yulia iyo aabeheed Sergei Skripal
Hay'adda dacwadaha ee UK ayaanan ka codsan karin xukuumadda Ruushka inay dib ugu soo celiso dalkeeda ragaan loo heysto eedeymahan, maadama Ruushka uusan kala dhexeynin dalka UK heshiis dib la isugu celinayo ragga dambiyada ka galo labada dal.
Booliiska ayaa sii daayay muuqalada CCTV oo muujinaya labada nin oo ku sugan garoonka Gatwick
Xukuumadda Ruushka oo ka jawaabeysay eedyemaha loo soo jeediyay raggan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku waxa ay sheegtay in magacyada iyo sawirada la baahiyay ee raggan "aysan waxba ka khuseynin".
Suntii Skripal: Dadka degan Salisbury oo loo sheegay in magaaladu nabad tahay
Ms Sturgess ayaa ku geeriyooday isbitaalkii la dhigay 9 bishii Julay. Halka Mr Rowley laga soo saaray 20 bishii July.
Sue Hemming oo ah agaasimaha hay'adda dacwadaha ee CPs ee UK ayaa sheegay inay jiraan cadeymo ku filan dacwada loo heysto ragga ka dambeeyay iskudayga dil ee lala damacsanaa Skripal iyo gabadhiisa.
Sawir laga qaaday Yulia bsihii May kaddib markii isbitaalka laga soo saaray
Dowladda UK ayaa Ruushkaa ku eedeysay weerarka, balse Ruushka waa ay beeniyeen arrintaas.
Farmaajo oo ku dhawaaqay go'aan cirka ku sii shareeray khilaafkii kala dhexeeyay Rooble
Saraakiil boolis oo ku dhaawacantay dagaal askart ku dhex maray Muqdisho